I-Australian Shepherd Blue Heeler Mix: Okufanele Ukwazi Ngaphambi Kokuthenga - Izinhlobo
I-Australian Shepherd Blue Heeler Mix: Okufanele Ukwazi Ngaphambi Kokuthenga
Kunezizathu eziningi zokuba ne-Australian Shepherd Blue Heeler Mix.
Zilungele kakhulu labo abahlala epulazini noma ezweni kepha awudingi ukuhlala epulazini ukuze ujabulele konke okutholwa yilolu hlobo.
Amamixube weHeeler enza izinogada ezinhle zemindeni. Bazovikela ikhaya lakho njengoba bevikela ipulazi.
Ukwethembeka namandla abo akunamkhawulo.
Uma lokhu inja ekhuthele yokwelusa yilokho okudingayo bese ugcina ukufunda ukuze ufunde konke odinga ukukwazi ngalolu hlobo ...
I-Australian Shepherd Blue Heeler Mix Shazi
Uhlolojikelele we-Australia Shepherd Blue Heeler Mix
Yimalini Imali Yomxube wase-Australia Blue Heeler Mix?
Ukubukeka Kwenhlanganisela ye-Australia Shepherd Blue Heeler
Umhlahlandlela Wokunakekelwa Kwe-Mixed Herbal Blue Heeler wase-Australia
Uqeqesha Kanjani Izingxube ze-Aussie neBlue Heeler
Thatha izinja ezimbili zokwelusa ezinekhono uzihlanganise ndawonye bese uthola i-Mixed Australian Shepherd Blue Heeler Mix.
Lolu hlobo lokuxuba yinja yangaphandle enekhono langempela lokwalusa imfuyo. Ngaphandle kokuvikelwa kwemfuyo benza inja enhle yokubuka ehlala yazi lapho kukhona okushaya amanzi endlini. Benza nenja enhle kakhulu yokusebenza ngenxa yobuhlakani babo obukhulu nokuzimisela kwabo ukufunda.
Ukuthandwa: # 6.
Isisindo: 25-50 amakhilogremu.
Intengo: $ 200- $ 700.
Ubuntu: Ukulangazelela, ukusebenza kanzima nokuqapha.
Inja Yezinkomo Zase-Australia
Intengo : $ 600- $ 1000
Usayizi : 35-50 amakhilogremu
Chitha : Ephansi / Ephakathi
Intengo : $ 500- $ 1000
Isikhathi sokuphila : Iminyaka engu-10-17
Usayizi : 25-45 amakhilogremu
I-Aussie Blue Heeler Mix
Intengo : $ 200- $ 700
Isikhathi sokuphila : Iminyaka engu-13-16
Usayizi : 25-50 amakhilogremu
I-Australian Shepherd Blue Heeler Mix yaziwa nangokuthi iTexas Heeler noma iTexas Cattle Dog.
Bayinhlanganisela phakathi kuka-Shepherd wase-Australia kanye ne-Australian Cattle Dog futhi zivame ukusetshenziswa njengenja esebenzayo epulazini noma epulazini.
I-Aussie Shepherd yazalelwa belusa imihlambi yezimvu kanti iBlue Heeler yenzelwe ukugcina izinkomo zilandelana.
Ngakho-ke ngalokhu kuhlangana uthola inja epulazini enenhloso enhle engenza okuncane kokubili!
Hhayi lokho kuphela kepha bazogada indlu ngamehlo abukhali nokwethembeka okungapheli emndenini wabo.
Yize benobungane kubantu imvelo yabo yokusebenza ngokweqile ibenza bakude kancane ngezinye izikhathi. Bayabaqapha abantu abangabazi futhi kwesinye isikhathi baziphathe kabi kumalungu omndeni.
Le Mxube yeBlue Heeler ingamandla amakhulu kakhulu futhi ilindele ukuthi isetshenziswe.
Ngenxa yalokhu zingaba uhlobo oluphezulu lwesondlo ngakho-ke akuwona wonke umnikazi angakwazi ukuzithathela.
Kuhle emsebenzini wepulazi.
Inogada enhle kakhulu.
Igcina umnikazi wayo esebenza kakhulu.
Inobungani bomndeni kakhulu kunezinye izinhlobo ezisebenzayo.
Ungakwazi ukufuya izimvu nezinkomo.
Ulaka kwezinye izinja.
Ukungabi nabungane kubantu ongabazi.
Kungaba kude nomndeni ngenkathi usebenza.
Akuyona inja enhle yasendlini.
Ngezikhathi zasekuseni i-Australian Shepherd Blue Heeler Mix yakho izobe iphapheme futhi imile ngezinyawo ngaphambi kokuba uvuke.
Bazogada indlu ngokwethembeka uze uvuke.
Uma usuvukile bazokuphuthuma bangene embhedeni wakho bancenge ukuthi uvuke embhedeni. Kaningi ukusondeza kwabo ekuseni kakhulu kuzoba ikholi yakho yokuvuka.
Ngemuva kokudla kwasekuseni i-pooch yakho izobe isilungele ukuya emsebenzini.
Benze bajabule ngokubakhiphela ekuseni ngovivi behle ngomkhondo wakho owuthandayo olandelwa umdlalo egcekeni.
Uma inja yakho isivumele amandla ayo ungaya emsebenzini wazi ukuthi umngani wakho oqotho uzogada indlu njengoba belinde ukuthi ubuye. Uma usebenza kude nasekhaya usuku lonke kuzodingeka ukuthi uhlele umhleli ozobakhipha izikhathi ezimbalwa ukusiza ukuphatha amazinga abo wamandla.
Lapho usuku lwakho lomsebenzi seluphelile usuku lwakho lwe-Heeler seluqalile. Isikhathi sokudla ntambama silandelwe ukuhamba nohambo oluya epaki.
Wena kanye ne-pooch yakho nikwazi ukuchitha yonke intambama nihlola wonke amakhona epaki, nidlala umdlalo wethegi futhi nithatha uhambo olude nihamba ngemigwaqo yasendaweni.
Isihlalo sangemuva semoto sizoba indawo eyamukelekayo yokuphumula ngemuva kokuthi inja yakho isikhathele yonke. Ngemuva kwesidlo sakusihlwa uHeeler wakho ekugcineni uzoqala ukushisa usuku.
Uma inja yakho inendawo ebiyelwe ngaphandle lapho-ke ungakusebenzisa kusihlwa ukuthola ama-zoomies wokugcina aphume.
Lapho ilanga lishona bobabili wena nenja yakho niyolungela ukuphumula ebusuku.
Uma i-pup yakho ihlala endlini izosonga phansi phansi eceleni kombhede wakho. I-Outdoor Heelers izothola indawo ephephile yokuchitha ubusuku.
Inja yakho ingavuka izikhathi eziningana ebusuku ukuze nje iqiniseke ukuthi konke kulungile endlini. Ngakusasa bazobe bekulungele ukwenza i-adventure entsha sha.
Bona Isihloko Esihlobene: Umhlahlandlela we-Blue Merle Border Collie: Amaqiniso ama-5 Okufanele Afundwe
Ukuze siqonde umlando walolu hlobo kudingeka siqale sibheke zombili izinhlobo zabazali.
Umalusi wase-Australia uphuma kubalusi basePyrenean ababaletha e-Australia bevela eYurophu.
Ngenkathi e-Australia laba Balusi babekhona ihlanganiswe noCollies .
Le nhlanganisela kaPyrenean noCollie yethulwa e-US ekuqaleni kwekhulu lama-20.
Abelusi banamuhla base-Australia bavela kulezi zinja futhi lo mhlobo waqashelwa ngokusemthethweni ngo-1993.
Ngakho-ke igama labo (i-Australian Shepherd) lingelona igama elifanele njengoba lolu hlobo lwaqala esifundazweni saseCalifornia.
Ngenkathi i-Australian Cattle Dog (noma i-Blue Heeler) iyinja yangempela yase-Australia enomlando ogqamile kakhulu wokuzala. Okhokho babo bahlanganisa izinja zezinkomo zaseSmithfield, ama-dingo ase-Australia, amaCollies kanye namaDalmatians.
Baziswa e-United States ngekhulu lama-20 futhi babonwa yi-AKC ngo-1980.
Ngasekupheleni kweminyaka yama-1980 abafuyi baseTexas baqala ukuxuba lezi zinhlobo ezimbili futhi badala i-Australian Shepherd Blue Heeler Mix.
Babeyazisa le nja esebenza ngayo yonke inhloso njengoba bengathanda izinhlobo ezahlukene zemfuyo .
Umhlobo lo usathandwa khulu emaphandleni weTexas kodwana sebephume bangena emadlelweni njenge-watchdog eqotho.
I-Australian Shepherd Blue Heeler Mix ivela ezifundeni zaseTexas yingakho banikezwa igama lesidlaliso elithi Texas Heeler.
Ingxenye kuphela yohlu lozalo lwenja empeleni eyi-Australia. IBlue Heeler iyinja yase-Australia ngempela kepha i-Australia Shepherd empeleni iyinhlobo yaseMelika.
Igama elithi heeler lisho ukuthambekela kwale nja ukuncipha ezithendeni zezinkomo - kwesinye isikhathi bazozama lokhu kubanikazi bazo noma kwezinye izinja.
Njengoba bengahlanjululwanga abanayo iklabhu esemthethweni yokuzalanisa kepha banenhlangano yabo yokuhlenga (The Texas Cattle Dog Rescue).
Lezi zinja zingcono kakhulu emadlelweni kepha ziyawathanda namanzi. Ukubhukuda kungenye yezinto abazithandayo ngesikhathi sasehlobo.
I-US Service and Support Animal Registry ibona lolu hlobo njengenja yezinsizakalo - baqeqeshwa futhi njengenja yamaphoyisa.
Udinga ukuqonda ukuthi i-Australian Shepherd Blue Heeler Mix iyinja esebenzayo kuqala.
Zijwayele izinsuku ezinde nezimatasa epulazini.
Ekuhlelweni kwasekhaya le pooch idinga indawo yamandla abo futhi ukuthambekela kwayo kokwelusa . Ngaphandle kwesitolo esifanelekile bazolimaza kakhulu futhi bangabonisa ukuhlukumeza abanye.
Inja inamandla amakhulu futhi ifuna ukuchitha cishe sonke isikhathi sayo ngaphandle.
Uma ungahlali epulazini ungakha indawo ebiyelwe ngaphandle noma ipeni lomfundi wakho uma unesikhala esanele.
Ngenkathi besebenza bazobonakala bekude nomndeni wabo kepha lokhu kungenxa yokuthi bagxile kakhulu ekusebenzeni. Uma usuqedile amandla alo pup bazokwamukela ukunakwa kwabathandekayo babo.
Zilungiselele ukuzwa ukukhonkotha okuningi. Epulazini le nja izokhonkotha izokwazisa imfuyo nabanikazi bayo bezilwane ezingaba yingozi endaweni. Endlini le nja izokhonkotha abantu abangabazi abadlula ngendlela futhi bavakashele omakhelwane.
Bazodinga ukuqeqeshwa ukuze bahlukanise umngane nosongo. Kuzothatha ukubekezela okuningi ngaphambi kokuba inja yakho ifunde ukuthi yini futhi akuyona ingozi. Kuze kube yileso sikhathi kufanele ulungele umsindo omncane.
Uhlobo lolo lungcono kakhulu kubanikazi abadala noma emakhaya anezingane ezindala nentsha.
Izingane ezincane zingaphansi kwesithende esinqamula i-Aussie ne-Blue Heeler Mix eyaziwa ngayo.
Ukuncinza nokuluma kufanele kulindeleke kuphume umdlwane kepha kufanele kulungiswe ngokushesha okukhulu ukuze kungabi yinkinga lapho inja inkulu futhi inamandla kakhulu.
Umdlwane omncane ungaqapha kakhulu futhi ube namahloni lapho uzungeze abanye abantu ngakho-ke bazodinga ukuzijabulisa okuningi kusukela besebancane.
Ungalindeli ukugonwa nokuqabulwa okuningi okuvela kulolu hlobo.
Bazokhombisa uthando lwabo ngendlela yalo ngokusiza ekhaya.
I-Heeler Mix yakho izobheka ngokucophelela ikhaya lakho futhi uma kukhona okungahambi kahle lapho-ke bazoba ngabokuqala ukukwazisa.
Intengo emaphakathi ye-Australian Shepherd Blue Heeler Mix puppy ingama- $ 500. Labo abanombala woboya ongajwayelekile bazobiza kancane.
Izinja ezindala zivame ukuba yintengo ephansi ngenxa yokufunwa kwazo okuphansi.
Sekukonke lolu luhlobo olungabizi kakhulu.
Umdlwane $ 200- $ 700
Umuntu omdala $ 200- $ 400
Ukutholwa $ 150- $ 250
Lolu hlobo luthandwa kakhulu ezweni labo laseTexas ngakho-ke kungenzeka ukuthi uthole umfuyi lapho. Ngaphandle kweTexas ukuzalanisa kunzima ukuthola futhi kubiza kakhulu.
Qiniseka ukuthi uhlola uhlu lwazo ngaphambi kokuthenga i-pup. Imvamisa lokhu kuxubana kudidaniswa ne- I-Australian Shepherd Border Collie Mix futhi kungenzeka ukuthi uthola uhlobo oluhlukile kunalolo ubulindele!
Lapho wenza isabelomali se-puppy yakho entsha uzodinga ukuthola inani lesikhala esidingekayo ukuyigcina. I-Heeler Mixes isendaweni yabo ejabule kakhulu ngaphandle futhi izodinga indawo enkulu yokuzivocavoca kuyo uma ihlala ngaphakathi.
Imibala ethile yoboya njengokuhlangana kungabiza kakhulu ngenxa yokufunwa okuphezulu. Kufanele ucabangele umbala woboya ovame kakhulu (njengombala omnyama noma o-tan) uma usesabelomali.
Amakilasi okuqeqesha azodingeka ukuhlanganisa lolu hlobo. Amakilasi amaningi azokhokhisa ngehora kepha kufanele uthengele okukuhle kakhulu kubhajethi yakho. Amanye amakilasi wokuqeqesha anamandla angaqhubeka aze afike ku- $ 100 noma ngaphezulu.
Yize lolu hlobo lwaziwa awekho amazinga weqiniso wohlobo.
Kodwa-ke ungalindela inja ephakathi nendawo enemilenze emide futhi emile egijima.
Iningi lama-Heeler Mixes lizoba nezindlebe eziqondile namehlo abanzi aqaphile - angazuza ngisho ne-Australian Shepherd's ukumamatheka kwesithonjana .
Zizoba nesifuba esijulile kanye nefronta ebanzi kanye nangemuva.
Ngokubheka nje kuphela le nja uyazi ukuthi yakhelwe ukusebenza kanzima.
Ungalindela ukuthi lokhu kuhlangana kume phakathi kwamasentimitha angu-17-20 ubude nesisindo esingamakhilogremu angu-25-50.
Abesilisa: amasentimitha angu-18-20 namakhilogremu angu-30-50.
Abesifazane: amasentimitha angu-17-19 namakhilogremu angu-25-40.
Kuze kube manje lokhu kuhlanganiswa kungenye yezinja ezimibalabala kakhulu ezungeze.
Uboya bayo bungaba cishe yimuphi umbala namaphethini kufaka phakathi i-blue merle ne-calico . Kaningi bazoba nokuhlanganiswa kwemibala eminingi ehlukene.
Amachashazi amnyama nampunga noma amachashazi e-polka ajwayelekile kakhulu futhi azuzwa njengefa kumzali wawo we-Blue Heeler.
Ijazi labo lingaba lifushane noma libe maphakathi ubude futhi lizoba nokuthungwa okushelelekile nokusilika.
Ngokumangazayo azichiphi kakhulu njengoba ungalindela. Ijazi labo lihle kakhulu ekuzinakekeleni futhi bazodinga kuphela ukuxubha kanye ngesonto.
I-Australian Shepherd Blue Heeler Mix iyi- inja yesondlo ephezulu lokho kulungele umndeni okhuthele kakhulu.
Le nja ifuna ukuchitha isikhathi sayo esiningi ngaphandle futhi noma yimuphi umnikazi kufanele abe nolwazi ngokusebenza noma ukwalusa izinhlobo.
Ama-Heeler Mixes ayinselelo ongayithatha kodwa kuwufanele uma ungawenza usebenze.
Bazokukhokhela ngokwethembeka okungenamkhawulo ongeke ukwazi ukukuthola kwenye indawo.
Ukushayela kwabo inyamazane, amandla aphezulu nokuqapha izinto okudingeka uzicabangele.
Lona uhlobo olusebenzayo kakhulu.
Imixube yase-Australia Shepherd Blue Heeler izodinga imizuzu engama-90 yokuzivocavoca ngaphandle nsuku zonke.
Bathanda ukugijima ngaphezu kokuhamba ngakho-ke cabanga ukuguqula ukuhamba kwabo kwansuku zonke kube ukugijima noma ukugijima.
Uyakuthanda nokunyuka ukuze ukwazi ukuhamba nabo.
Ukuhamba kufanele kwenziwe nge-leash ngaphandle kokuthi nobabili nisondele ekhaya - le nja yaziwa ukuthi iyasuka futhi kungaba nzima ukuyibiza futhi.
Esikhundleni samathoyizi nenja ejwayelekile yale Mix ikhetha ukuhlola ukukhuthazela kwabo futhi izosebenzisa isikhathi sabo esiningi begijima begxuma. Vele uma unemfuyo khona-ke le pooch izokwenza umsebenzi owazalelwa wona.
Ingqikithi Yomsebenzi Wansuku zonke: Imizuzu engama-90.
Umsebenzi owuthandayo: Iyagijima.
Ngenhlanhla le nja inengubo emfushane kasilika engabeki inkatho.
Bazodinga ukuxubha kanye ngesonto.
Njengoba bayizinja zangaphandle izindlebe zabo kufanele zihlolwe njalo ukuthola inqwaba yenhlabathi. Izindlebe zabo ezinkulu ezizokhomba zizongcola kakhulu njengoba beqhubeka nohambo lwabo lwansuku zonke.
Izinja zangaphandle ezisebenzayo zivame ukufaka izinzipho zazo phansi njengoba zigijima kepha kusamele uhlole izinzipho njalo emavikini amabili noma amathathu ukuze uqiniseke ukuthi azide kakhulu.
Uma uhlela ukusebenzisa i-nail clipper kuzofanela ubenze bajwayele ama-nail clippers njengedlwane.
Inja yamandla amakhulu njenge-Australian Shepherd Blue Heeler Mix kumele bondliwe ukudla okungcono kakhulu ngempilo yabo enamandla.
Inja yakho kufanele ibe nama-calories ayi-1200 wamaprotheni, ama-carbs namafutha anempilo nsuku zonke.
Ungabanika inkomishi ye-protein kibble kathathu ngosuku.
Uma ungathanda ungacisha enye yezinkomishi zabo zansuku zonke nge- ukusikwa kwenkukhu noma inyama yenyama ephekiwe. Iningi lokondleka kwenja yakho kufanele livele emithonjeni yangempela yenyama nenyama. Qiniseka ukuthi akukho okugcwaliswayo okuncane noma imikhiqizo ekleliswe kuzithako zokudla kwenja yakho.
Iningi lokuzuza kwabo isisindo lizokwenzeka phakathi kwezinyanga ezintathu kuya kwezi-6 ubudala.
Izinja zesilisa zizofinyelela kumakhilogremu angama-30 kuye kwangama-50 ngaphambi nje kosuku lwazo lokuzalwa lwesibili kanti ezesifazane zizoba nesisindo esiphakathi kwamaphawundi angama-25 kuye kwangama-40.
Lokhu kuvame ukuzala okunempilo kakhulu njengoba ubungalindela enjeni esebenzayo.
Kodwa-ke kusenezinkinga ezimbalwa zezempilo okufanele uziqaphele.
Distichiasis: Lesi yisimo samehlo lapho izinwele ezengeziwe zikhula khona ngaphakathi kwezinkophe zenja. Lezi zinwele zingadala ukucasuka kwamehlo futhi ziholele nasezilondeni ku-cornea. Izinwele zingabonakala uma ubheka eduze kakhulu kepha kungenzeka ukuthi ubone ububomvu nezinyembezi ezengeziwe. Umfundi wakho uzodinga ukuhlinzwa ukulungisa lokhu kepha ezimweni ezimnene amaconsi namafutha kungasetshenziswa ukunciphisa ukucasuka.
Izithulu: Ngeshwa izinja ezinemibala ethandekayo zisengozini yokungezwa ngokuzalwa. Izinja zingaba yisithulu kusukela ekuzalweni noma thuthukisa ukulahlekelwa ukuzwa bayakhula. Ukulahlekelwa kokuzwa kuletha izinselelo ezintsha ze-Heeler Mix kepha ngokubonga nakho kuyalawuleka kakhulu. Izinja eziyizithulu zizovumelana nokufunda ukucija ezinye izinzwa zazo ukuze zikwazi ukuqhubeka nokwenza umsebenzi wazo yize zikhubazekile. Izithulu azivamile ngaphandle kwezinhlobo ezinemibala ehlanganisiwe.
Ngabe I-Australia Shepherd Blue Heeler Mix ihlala isikhathi esingakanani?
Ungalindela ukuthi i-Australian Shepherd Blue Heeler Mix iphile iminyaka eyi-13 kuya kwengu-16.
Ukuqeqesha i-Blue Heeler Mix kusuka kumdlwane kubaluleke kakhulu ukusiza ukukhipha noma yikuphi ukuthambekela kokwalusa nokukhonkotha.
Kufanele uqale ukulungiselela i- Uhlelo lokuqeqesha inja ngaphambi kokuthi uze nawo ekhaya!
Ama-Heelers ayaziwa ngokuhlola imingcele ngakho-ke inja yakho kufanele iqonde ukuthi ngeke uyeke.
Ukuqeqesha akuphelile uze usho ukuthi kuphelile futhi ukuphindaphinda kubalulekile.
Ngesikhathi sokuqeqeshwa okunzima ungakhiphi ukukhungatheka kwakho noma ingane yakho izokulanda. Hlala unethemba noma ngabe kunzima kanjani futhi inja yakho izokubonga. Ukuxhumana nabantu kufanele kwenziwe nawe eduze kunokuba kude nasekhaya. Inja yakho ingazizwa ikhathazeke kakhulu ukuhlangana nabantu ongabazi ngaphandle kwalapho ukhona.
Ukwesaba abantu akuyona into engavamile ngalolu hlobo ngakho ukuxhumana nomphakathi kusenesikhathi kubalulekile.
Cishe ngeke bafunde ukuthanda abantu abangabazi kepha bangafunda ukuhlalisana kahle nabo.
Lena akuyona inja engazidlalela yodwa noma isale yodwa ihlafuna intambo. Balindele ukunikezwa izinselelo zansuku zonke zokusebenzisa ukukhuthazela namandla abo wobuchopho.
Banikeze okuhlangenwe nakho okusha nsuku zonke futhi abasoze babhoreka.
Thatha inja yakho ohambweni lokuhamba izintaba, umzila wokugijima nokunye ukuzidela kwansuku zonke.
Ungadlala futhi imidlalo efana nethegi. Umaki ngumdlalo omnandi ongadlala ngawo noma iyiphi inja yokwalusa . Icija imvelo yabo yokwelusa ngendlela ephephile nejabulisayo.
Ngenkathi udlala ungasebenzisa lelo thuba ukwenza imiyalo efana nokuhlala, ukuhlala nesithende. Inja yakho izozijabulisa futhi ifunde ngasikhathi sinye.
I-Australian Shepherd Blue Heeler Mix ingenye ye- izinja ezithandwa kakhulu ngumlimi .
Noma ngubani ofuna umlingani wokuqina uzothanda le nja amandla angenamkhawulo.
Lo mlusi owusizo uhlala efuna ukugcinwa ematasa futhi uhlala ekulungele ukuzidela okusha. Umoya wabo wokuzijabulisa uzokwenza wena nomndeni wakho nijabule ukuhlola nawo.
I-Blue Heeler Mix izoba ngomunye wabangane abakhulu kakhulu owake waba nabo.
Uma ungabakhela ikhaya elihle bazokuthanda kuze kube phakade.
Sicela usazise uma unemibuzo esigabeni sokuphawula ngezansi ...
blue nose pitbull breed info
malini i-alaskan klee kai
ama-huskies ahlanganiswe nani
amagama amahle ezinja zama-huskies
shih tzu nezinja zokuxuba i-yorkie